Social Media Agency ရွေးရင် ဒီအချက်ကြီး ၉ ချက်နဲ့ရွေးပါ။ : A Creative Digital Agency - Digital Dots
Social Media Agency ကို ရွေးတော့မယ်ဆိုရင် ဒီ (၉) ချက်ကို မျှော်မှန်းပြီး ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်…။
သင့်ရဲလုပ်ငန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Social Media Platforms တွေကို ရွေးချယ်တတ်ရဲ့လား?
တော်တော်များများ လုပ်နေကျဖြစ်တဲ့ ဖန်တရာတေ Social Media Marketing နည်းတွေလောက်ပဲ လုပ်ပေးနိုင်တာလား?
မတူညီတဲ့ နယ်ပယ်ကသူတွေနဲ့ ကောင်းကောင်းမွန်မွန်စုစည်း အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ အဖွဲ့အစည်းမျိုး ဖြစ်ရဲ့လား?
Trends နောက်၊ Social Media Strategy နောက်ကို အမီလိုက်နိုင်ပြီး Deadline အမီ အလုပ်လုပ်နိုင်ရဲ့လား?
Data တွေ၊ Tools တွေကို ကျွမ်းကျင်စွာနဲ့ Social Media Campaign တွေရဲ့ အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေကို တိုင်းတာကာ Analysisလုပ်တတ်ရဲ့လား?
Social Media Marketing အကြောင်း သူတို့ဝန်ထမ်းတွေကို အစဉ်အမြဲ Update လုပ်ပြီး လေ့ကျင့်ပေးနေလား? ပညာတွေ ပို့ချပေးနေလား?
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင် Social Media Accတွေကိုရော ကောင်းကောင်းကိုင်တွယ်နိုင်လား?
နေ့စဉ်ပြောင်းလဲနေတဲ့ ဈေးကွက်နဲ့ နည်းဗျူဟာတွေကို မျက်ခြေမပြတ်စောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေလား?
ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်က သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ ဈေးကွက်ပြောင်းလဲမှုကိုရော သေချာနားလည်ကြလား? သင့်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကို ဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာ အရောင်းမြှင့်တင်ဖို့ Agency ငှားမယ်ဆိုရင် ဒီမေးခွန်း (၉) ခုကို ဦးစွာ ဆန်းစစ်ပြီးအဖြေရှာသင့်ပါတယ်။ သင်ရှာနေတဲ့ ဒီမေးခွန်းတွေအတွက်အဖြေက … Digital Dots မှာရှိပါတယ်။